Ọchịchọ njem ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ na-eweghachite obere oge na Septemba
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọchịchọ njem ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ na-eweghachite obere oge na Septemba
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Willie Walsh, onye isi ụlọ ọrụ IATA.
Mgbanwe amụma US na nso nso a iji mepe njem site na ahịa 33 maka ndị mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi zuru oke site na 8 Nọvemba bụ ihe nnabata, ma ọ bụrụ na oge gafere, mmepe. Tinyere mmeghe n'oge na-adịbeghị anya n'ahịa ndị ọzọ dị mkpa dị ka Australia, Argentina, Thailand, na Singapore nke a kwesịrị inye nkwado maka mweghachi nke nnwere onwe nke njem.
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke njem ụgbọ elu na Septemba 2021 (atụnyere na kilomita ndị njem na-enweta ego ma ọ bụ RPKs) gbadara 53.4% ​​ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019. Nke a gosipụtara ịrị elu site na Ọgọst, mgbe ihe achọrọ bụ 56.0% n'okpuru ọkwa August 2019.
Ahịa ụlọ dara 24.3% ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019, mmụba dị ịrịba ama site na August 2021, mgbe okporo ụzọ gbadara 32.6% karịa afọ abụọ gara aga. Ahịa niile gosipụtara mmụba ma ewezuga Japan na Russia, n'agbanyeghị na nke ikpeazụ nọgidere na mpaghara uto siri ike ma e jiri ya tụnyere 2019.
Ọchịchọ ndị njem mba ofesi na Septemba bụ 69.2% n'okpuru Septemba 2019, nke ka njọ karịa mbelata 68.7% edere na August.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kwuputara nlọghachi nke obere njem ikuku na Septemba 2021 ma e jiri ya tụnyere arụmọrụ Ọgọst. Ihe kpatara nke a site na mgbake n'ahịa ụlọ, ọkachasị China, ebe ebuliri ụfọdụ mgbochi njem mgbe ntiwapụ COVID-19 na August. Ọchịchọ mba ụwa, ka ọ dị, agbada ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga.
N'ihi na ntụnyere n'etiti nsonaazụ ọnwa 2021 na 2020 na-agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, ọ gwụla ma ekwuru na ntụnyere niile bụ na Septemba 2019, bụ nke gbasoro usoro ihe achọrọ.
“Arụmọrụ Septemba bụ ezigbo mmepe mana mgbake na okporo ụzọ mba ụwa ka kwụsịrị n'agbanyeghị mmechi oke na ikike iche iche na-aga n'ihu. Mgbanwe amụma US na nso nso a iji mepe njem site na ahịa 33 maka ndị mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi zuru oke site na 8 Nọvemba bụ ihe nnabata, ma ọ bụrụ na oge gafere, mmepe. Tinyere mmeghe n'oge na-adịbeghị anya n'ahịa ndị ọzọ dị mkpa dị ka Australia, Argentina, Thailand, na Singapore nke a kwesịrị inye aka na mweghachi nke nnwere onwe nke njem," kwuru. Willie Walsh, Onye isi Director IATA.
Ahịa Ndị njem Mba ofesi
Ndị na-ebu Europe ' Okporo ụzọ mba ụwa nke Septemba gbadara 56.9% na Septemba 2019, gbadara pasentị 1 ma e jiri ya tụnyere mbelata 55.9% n'August na otu ọnwa ahụ na 2019. Ike gbadara 46.3% yana ihe ibu dara 17.2 pasent ruo 69.6%.
Asia-Pacific ụgbọ elu hụrụ na okporo ụzọ mba ụwa nke Septemba dara 93.2% ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019, ọ fọrọ nke nta ka ọ gbanwee site na mbelata 93.4% edebara aha na August 2021 na Ọgọst 2019 ka mpaghara ahụ na-aga n'ihu na-enwe usoro nchịkwa oke ókè. Ike gbadara 85.2% na ihe ibu ahụ gbadara pasentị 42.3 ruo 36.2%, dị mfe nke kacha ala n'etiti mpaghara.
Middle East ụgbọ elu nwere mbelata 67.1% chọrọ na Septemba ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019, emelitere ntakịrị karịa mbelata 68.9% n'August, n'otu ọnwa ahụ na 2019. Ike dara 52.6%, na ihe ibu na-agbada pasent 23.1 ruo 52.2%.
North America na-ebu nwetara mbelata okporo ụzọ 61.0% na Septemba karịa oge 2019, ọ dịtụ mma na mbelata 59.3% n'August ma e jiri ya tụnyere Ọgọst 2019. Ike dara 47.6%, na ibu ibu dara 21.3 pasent ruo 61.9%.
Ndị ụgbọ elu Latin America hụrụ mbelata 61.3% na okporo ụzọ Septemba, ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa ahụ na 2019, mbelata mbelata 62.6% n'August ma e jiri ya tụnyere Ọgọst 2019. Ike Septemba dara 55.6% na ihe ibu butere 10.7 pasent na 72.0%, nke bụ ihe kachasi ibu n'etiti mpaghara maka ọnwa nke iri na abụọ n'usoro.
African ụgbọ elu ' okporo ụzọ dara 62.2% na Septemba karịa afọ abụọ gara aga, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 4 ka njọ karịa mbelata 58.5% n'August ma e jiri ya tụnyere August 2019. Ike Septemba gbadara 49.3% na ihe ibu na-agbadata pasent 18.4 ruo 53.7%.
Ahịa engergbọ Ala Ndị Nọ n’Ebe Obibi
Septemba 2021 (% chg vs otu ọnwa na 2019)
Russian nri. 3.4% 29.3% 33.3% -2.6% 83.1%
Brazil ahịa ụlọ kwadoro mgbake nke nta nke nta ka ọ na-enwe ọganihu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Okporo ụzọ gbadara 17.3% ma e jiri ya tụnyere Septemba 2019 - emelitere site na ọdịda 20.7% n'August.
Ndị Japan Okporo ụzọ ụlọ nke Septemba gbadara 65.5%, na-akawanye njọ site na mbelata 59.2% na August na Ọgọst 2019, n'ihi mmetụta nke mmachi.
“Mkpọsa mmeghe nke ọ bụla yiri ka ọ nwere iwu ndị yiri ya mana dị iche. Anyị enweghị ike ikwe ka mgbake ahụ daa na mgbagwoju anya. Nke ICAO Ọgbakọ Ọkwa dị elu na COVID-19 kwetara na nkwekọ kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa. G20 kwuputara nkwa ime ihe iji kwado mgbake na njem na-enweghị nkebi, nkwado, na dijitalụ. Ugbu a gọọmentị ga-etinyerịrị omume n'azụ okwu ndị a iji ghọta usoro dị mfe ma dị irè. Ndị mmadụ, ọrụ, azụmahịa na akụ na ụba na-adabere na ọganihu n'ezie," kwuru Walsh.
Ọhụụ IATA maka iweghachi njikọ zuru ụwa ọnụ n'enweghị nsogbu dabere n'ụkpụrụ isi ise:
Ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị ịdịịrị mmadụ niile ngwa ngwa o kwere mee.